Shiinaha Shiinaha jumlada WPC cuskado isku xira biyuhu WPC dibadda balustrades saarayaasha iyo shirkado | Lihua
Shiinaha WPC jumlada farcan isku darka biyuhu WPC balustrades dibadda
Taageero farsamo oo khadka tooska ah ah
si loo ilaaliyo amniga dadka. Waxaan haynaa dhowr nooc oo gacmo-gashi WPC ah si aan u qancino baahiyaha macaamiisha kala duwan. Sidoo kale taabashada alwaax dabiici ah iyo taabashada, tani waxay la kulmi kartaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Qalabka gacanta ee WPC waxay leeyihiin naqshad qurux badan oo qurux badan iyo dayactir si fudud cayayaanka u adkaysta iyo qalafsanaanta sare. Deegaanka u fiican, dib loo cusbooneysiin karo oo aan lahayn kiimiko kale oo qatar ah, keydinta kheyraadka keynta.
● Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, midab iyo cabirba waxaad ku xulan kartaa xulashadaada. Fadlan xor u noqo inaad na weydiiso.
Hore: Bannaanka Isku-darka Isku-darka Wood WPC Cladding
Xiga: Dhirta biyuhu ka kooban yihiin alwaax WPC ubaxa dheriga Beerta Beerta
Q1: Waxyaabahaaga WPC ma la socon karaan astaanta macaamiisha?
J: Haa, haddii macaamilku na siiyo astaantooda, calaamadda ayaan ku dhejin karnaa baakadaha badeecadaha ama ku daabici karnaa alaabooyinka gaarka ah!
Q2: Mudo intee le'eg ayaad u samaynaysaa caar cusub oo alaab cusub ah?
J: Guud ahaan, waxaan u baahanahay 15-21 maalmood si aan u sameysano caaryo cusub, haddii ay jiraan xoogaa farqi ah, 5-7 maalmood oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo wax ka beddello yaryar.
3.Q3: Macaamiilku ma wuxuu ubaahan yahay inuu bixiyo khidmadda caaryada cusub? Immisa ayey tahay? Miyaynu soo celin doonaa khidmaddan? Muddo intee le'eg baa
J: Haddii macaamilku u baahan yahay inuu sameeyo caaryo cusub, haa waxay u baahan yihiin inay bixiyaan khidmadda caaryada marka hore, waxay noqon doontaa $ 2300- $ 2800. Anaguna dib ayaan u soo laaban doonnaa khidmaddan markii uu macaamilku saddex amar ku bixiyo weelka 20GP.
Q4: Waa maxay qeyb ka mid ah wax soo saarkaaga WPC? Maxay yihiin?
J: Qaybaha alaabtayada WPC waa 30% HDPE + 60% Fibers Alwaax ah + 10% Ku darida Kiimikada.
5.Q5: Mudo intee le'eg ayaad cusbooneysiineysaa alaabadaada?
Q6: Waa maxay mabda'a naqshadeynta muuqaalka sheygaaga? Waa maxay faa'iidooyinka?
S7: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Maxay tahay awoodda nooc kasta oo dhinta?
J: Sida caadiga ah hal caaryadu way shaqeyn kartaa 2-3 maalmood, waanu ilaalin doonaa amar kasta ka dib, awoodda set kasta way ka duwan tahay, looxyada caadiga ah maalin maalmaha ka mid waa 2.5-3.5ton, 3D alaabooyinka la duubay waa 2-2.5ton, wada shaqeyn alaabada soo-saarista waa 1.8-2.2ton.
Q8: Waa maxay habka wax soo saarkaagu?
2.Artisan waxay diyaarisaa caanaha waxayna sameysaa muunad si loo xaqiijiyo midabka iyo daaweynta macaamiisha ka dib
3.Kadib samee granulation (Diyaarso walxaha), ka dibna wuxuu bilaabi doonaa soo saarid, badeecada wax soo saarka ayaa lagu ridi doonaa goobta gaarka ah, mar dambe ayaan sameyn doonaa daaweynta ka dib, ka dibna waxaan xirxiraa kuwan.
Q9: Mudo intee le'eg ayay tahay waqtiga dhalmada ee caadiga ah ee alaabtaadu?
J: Way ka duwanaan doontaa tirada. Guud ahaan waxay ku saabsan tahay 7-15 maalmood hal weel 20ft ah. Haddii 3D la galiyay oo la soo saaray alaab-wadaag, waxaan u baahanahay 2-4 maalmood oo guud ahaan ah habka isku-dhafan.
S10: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
J: Guud ahaan waxaan haysannaa tirada ugu yar, waa 200-300 SQM.Laakiin haddii aad rabto inaad buuxiso weelka illaa miisaanka xaddidan, alaabooyin dhowr ah ayaan kuu sameyn doonnaa!
S11: Waa maxay awoodaada guud?
J: Guud ahaan awooddeena guud waa 1000 tan bishiiba .Sidaa waxaan kudaridoonaa khadadka wax soosaarka oo dheeri ah, tani way sii kordheysaa waqtiga dambe.
Q12: Intee ayey le'eg tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah?
J: Lihua waa shirkad sare oo casri ah oo teknolojiyad cusub leh, oo daboolaysa warshad 15000 sq mitir ah oo ku taal Langxi Indusrial Zone.Waxaan haynaa in ka badan 80 shaqaale, kuwaas oo dhamaantood leh khibrad shaqo oo WPC ah.
Qurxiyo WPC cuskado
Shiinaha saaraha Shiinaha 130x10mm pla plav alwaax ...
Eco-saaxiibtinimo Wood Composite Co-extrusion WPC De ...
alwaax decking isku dhafan, Dabaqa WPC, Gogosha WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Bannaanka WPC decking, Qurxinta WPC,